Qingdao Yinuoxin New Ihe Co., Ltd. emi odude ke mara mma ala gbara osimiri okirikiri obodo Qingdao, n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Jiaozhou Bay, nso Qingyin Expressway. Nke dị nso na ọdụ ụgbọ elu Qingdao na-agha ụgha, Huangdao Container Terminal, Port Qingdao, Rizhao Bulgo Cargo Terminal, njem njem ahụ dị mma ma dịkwa mma. Companylọ ọrụ anyị nwere ikike ịbubata na mbupụ ya, ọ bụ ụlọ ọrụ na-ewepụta usoro mgbakwunye roba ma na-ere ngwaahịa kemịkal dị elu.
Kpọtụrụ anyị maka ịlele albums
Anyị nwere ọkachamara, elu-larịị, elu-edu ahịa ọrụ na management pesonel
Ma ọ bụ ire ere ma ọ bụ ire ere, anyị ga-enye gị ọrụ kachasị mma, na-enye gị ohere ịghọta ma jiri ngwaahịa anyị ngwa ngwa.
Kemgbe ọ malitere afọ asatọ gara aga, ụlọ ọrụ ahụ agbaala mbọ inye ndị ahịa ụlọ na mba ofesi ngwaahịa dị elu ma dị mma.
Ngwaahịa anyị nwere ezigbo mma na aha, nke na-enyere anyị aka ịtọ ọtụtụ ngalaba na ndị na-ekesa na mba anyị.
112020 / Nọvemba